Topimaso momba ny orinasa - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. dia miorina amin'ny tranoben'ny orinasa E6, siansa indostrialy sy Park Technology, Distrikan'i Xixiu, làlana Liangliu, Distrikan'i Xixiu, Anshun City, Faritany Guizhou, manarona faritra 3200 ㎡, miaraka amin'ny trano fanatobiana entana 409,, manana atrikasa 2000 and sy birao 420 ㎡ izahay. sy faritra onenana. Ny orinasanay dia orinasa mampiditra R&D, famolavolana, famokarana ary fivarotana. Tapa-kevitra ny hanome ny mpanjifanay serivisy tsara indrindra.
Our Ny orinasa dia miavaka amin'ny famokarana saron-tava FFP2, saron-tava FFP3, saron-tava fiarovana manokana kn95, sarontava fandidiana ara-pitsaboana, saron-tava sivily azo atokana, manana ny famokarana anatiny ny mari-pahaizana ara-pitsaboana izahay, nandalo ny fenitra fitsapana anatiny izahay Gb2626-2006, fenitra ivelany en149, en 14683, CE, sns.
Theorinasa mampifandray R & D, famolavolana, marika sy mivarotra miaraka ho lasa orinasa malaza eran-tany. Raha ny fahitana ny haitao fibre dia miditra amin'ny indostrian'ny fahasalamana izahay ary manome andiana maska ​​roa azo ampiasaina ary saron-tava kn95, saron-tava FFP2, saron-tava FFP3 ho an'ny fiarahamonina.
An Shun AKF Medical Technology Co., Ltd.dia orinasa vaovao eo amin'ny sehatry ny sarontava,
Manomboka amin'ny fisafidianana sy fividianana fitaovana ka hatramin'ny famolavolana fonosana, ary ny fisafidianana ny masinina, sns, izahay dia mamaritra fa izy no tsara indrindra amin'ity orinasa ity.
izahaydia tokony ho azo antoka fa ny sarontava rehetra novokarinay no tsara indrindra amin'ity orinasa ity. Avelao ny mpampiasa tsirairay an'ny sarontava AKF afaka mahazo
ny fiarovana tsara indrindra.
amin'nyankehitriny, ireo vokatra saron-tava Runbo dia hita any amin'ny firenena sy faritra maro manerantany, ao anatin'izany i Eropa, Etazonia, Alemana, Royaume-Uni, Aostralia, Rosia, Hong Kong, sns. Nanana andraikitra lehibe izy io nandritra ny vanim-potoanan'ny valanaretina, ary antenainay fa maro ny mpanjifa matihanina ao an-trano sy any ivelany no hatoky ny marika Runbo. Dia mirary soa anao rehetra amin'ny ady amin'ny valanaretina!
Rohy mifandraika ：